Afrikaans (/ æfrɪkɑːns, -kɑːnz /, US: /ˌɑːf - /) waa luqad Geesiga Jarmalka ah oo laga hadlo Koonfurta Afrika, Namibiya iyo, ilaa xad, Botswana iyo Zimbabwe. Waxay ka soo baxday Kirishtaanka Nederland ee Koonfurta Holland (lahjada Hollandka) oo ay ku hadlaan dadka reer Holland ee badanaa waxa hadda Koonfur Afrika, halkaas oo ay si tartiib tartiib ah u bilaabeen inay horumariyaan astaamaha kala duwan ee koorsada qarnigii 18aad Sidaa daraadeed, waa luqad gabar ah oo Dutch ah, waxaana horay loogu yeeraa "Cape Dutch" (ereyga oo loo isticmaalay in loo soo gudbiyo si wadajir ah dadka degan Cape) ama "jikada Dutch" (erey macquul ah oo loo adeegsan karo Afrikaanka maalmo hore). Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale lagu sifeeyey inuu yahay nooc keli ah ama luqad ahaan luuqad ahaaneed. Ereyga waxaa ugu dambeyn laga soo qaatay Holland Afrikanka-Hollands oo micnihiisu yahay "Afrikanka Dutch". Waa luqadda ugu horreysa ee Afrikaniyaanka iyo Midabada Koonfurta Afrika.
Inkasta oo Afrikaaniyadu ay ka qaadatay ereyo luqado kale ah, oo ay ku jiraan luuqadaha Jarmalka iyo ta Taitiisiya, qiyaastii 90 illaa 95% ereyada afrikaanka ah waxay asal ahaan ka soo jeedaa Dutch. Sidaa darteed, farqiga u dhexeeya Dutch wuxuu inta badan ku dhexjiraa habdhaqanka falanqaynta iyo naxwaha Af-soomaaliga, iyo hingaad muujinaysa Af-Ingiriisiga halkii ay ka heli lahaayeen heerka caadiga ah ee Dutch. Waxaa jira isbeddel ballaadhan oo u dhaxeeya labada luuqadood-gaar ahaan qaab qoraal ah.
Ku dhawaad ​​7 malyan oo ku hadla luqadaha Koonfurta Afrika, ama 13.5% dadweynaha, waa luqadda saddexaad ee ugu badan dalka. Waxay leedahay juquraafi juqraafi ah iyo jinsi ah dhammaan qaybaha 11 luqadaha rasmiga ah ee Koonfurta Afrika, waxaana si ballaaran loogu hadlaa loona fahmaa luuqad labaad ama saddexaad. Waa luqadda badankeeda qaybta galbeed ee Koonfur Afrika-gobolada ee Waqooyiga Cape iyo Western Cape-iyo luqadda ugu horreysa ee 75.8% ee Koofurta Afrikaanka ah (4.8 milyan oo qof), 60.8% dadka Koonfurta Koonfur Afrika (2,7 milyan); 4.6% of Asian South African (58,000 oo qof), iyo 1.5% dadka reer Koonfur Afrika ah (600,000 oo qof).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrikaans&oldid=188979"
Last edited on 14 Jannaayo 2019, at 09:43
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Jannaayo 2019, marka ee eheed 09:43.